Nagarik Shukrabar - नाइटमा त्रास नै त्रास
मङ्गलबार, २८ साउन २०७६, १० : ५३ | शुक्रवार
खेमराज खतिवडा, नाइट ट्याक्सी चालक, बा२ज १८४०
पहिले र अहिलेमा ट्याक्सी चलाउँदा के फरक छ ?
पहिले ट्याक्सीको पैसा थोरै प-थ्यो। कमाइ पनि राम्रै थियो। अहिले ट्याक्सीको भाउ बढेर ३२, ३३ लाख भन्न थालेका छन्। मैले नै यसअगाडि २७ लाख हालेर ट्याक्सी चलाएको हुँ। यसको लोन तिर्न र खानलाई निकै गाह्रो छ पहिल्लो समय ।
सबै चिजको भाउ बढेको छ तर ट्याक्सीको भाउ भने बढेको छैन। सरकारले नै ट्याक्सीलाई पेल्नुपर्छ भनेर लागिपरेको हो कि के हो थाहा छैन। ८ लाख रुपैयाँमा ट्याक्सी किन्दा र ३२ लाखमा ट्याक्सी किन्दा भाडाको रेट एउटै भएपछि धेरै गाह्रो छ। पहिले रातिमा अलिक डर हुन्थ्यो अहिले केही सहज त भएको छ तर त्रास भने त्यत्तिकै छ।
तपाईंलाई कहिले कहाँ कुट्नलाई झम्टिए ?
यही वैशाख १ गतेको दिन थियो। मैले रातो पुलमा रहेको रक हाउस क्याफेका स्टाफलाई पु-याउन राति १ बजे रामहिटीभन्दा अलिक माथि जाँदै थिएँ। रामहिटी कटेपछि ७, ८ जना केटा बाटोमा बसेका रहेछन्। उनीहरु गुरुरु मेरो ट्याक्सीलाई छेकेर छोडे । मैले ती बैनीलाई उनीहरुको रुमसम्म छोडेर फर्किँदा अघिका केटाले -याक गर्लान् भनेर उताबाट घुमाएर राधाकृष्णको बाटो हुँदै भृकुटी चोकबाट चाबहिल निस्कनु प-यो भनेर हिँडेको ठ्याक्कै तिनै केटा बसेका रहेछन्। मलाई आक्रमण गर्न थाले। कोही ट्याक्सी माथि चढ्छन्।अगाडिपछाडिबाट ८ जनाले घेरेर मलाई कतै जान दिएनन्। म एक्लो आठजनासँग भिड्ने त कुरै भएन।
उनीहरुले ढोका खोल्नुभन्दा पहिला नै मैले ढोका लक गरेँ। उनीहरुले मलाई सर्त राखे। हामीलाई ठमेल पु-याइदेऊ भन्ने। मैले नरम स्वरमा हुन्छ म ठमेल पु-यादिन्छु भनेर ढोका खोलिदिन लागेजस्तो गरेँ। ट्याक्सीमाथि हुटमा चढेका पनि ओर्लिए। ओर्लिएर टयाक्सीमा पस्ने तयारी गर्दा गर्दै मैले ट्याक्सी हुइँक्याएँ यसरी ज्यान पातमा राखेर ट्याक्सी चलाउन परेको छ। सरकारले त्यही माथि लुटेरा भन्ने आरोप लगाउँछ।
लुटे भन्ने आरोप त लाग्दै आइरहेको छ नि हैन र ?
लुटेको भए सबै ट्याक्सीवालाको घर हुन्थ्यो होला। सबैको बैंक ब्यालेन्स हुन्थ्यो होला। मैले पनि ट्याक्सी चलाउन थालेको यतिका वर्ष भयो। न मैले घर किन्न सकेको छु न बैंकमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्न नै। जसले पनि ट्याक्सीले लुट्यो, खायो भन्छन्। हामी बुढाबुढीले नै ट्याक्सी चलाएर बिहान बेलुका खान र छोराछोरी पढाउन ठिक्क भएको छ। मेरी श्रीमतीले दिउँसो ट्याक्सी चलाउँछिन् म नाइट चलाउँछु। एकजनाले मात्र चलाउने भए त खान बस्न पनि पुग्दैनथ्यो।